‘थ्याङ्क्यू संविधान’ : गण्डकी प्रदेश साँसद कृष्ण थापा - ढोरपाटन पोष्ट
गण्डकी प्रदेश साँसद कृष्ण थापाले, प्रदेश अधिवेशनमा चलिरहेको वजेट, नीति कार्यक्रमका विषयमा छलफलमा आफ्नो कुरा राख्दै वर्तमान संविधानलाई ‘थ्याङ्क्यू संविधान’ भन्नुभएको छ ।
यो संविधानमा माननीय सदस्यहरुको मतदान गर्ने अधिकार र हस्ताक्षर गर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गरिदिएको कुरा उल्लेख गर्दै साँसद थापाले, ‘जनताबाट निर्वाचित साँसदको अधिकार संविधानमा सुनिश्चित रहेको भन्दै त्यसका लागि थ्याङक्यू भन्न चाहन्छु ।’ भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट बागलुङ निर्वाचन क्षेत्र नं. १ प्रदेश (ख) बाट गण्डकी प्रदेशमा निर्वाचित साँसद थापाले आफ्नो भिन्न मत सहित पार्टिको केन्द्रीय निर्देशन विपरित उभिनुभएको छ । निर्वाचनका बेला बामगठबन्धनबाट निर्वाचित हुने तर सत्ताका लागि फेरि काँग्रेस नेतृत्वको सरकारमा समर्थन र मतदान गर्नुपर्ने पार्टिको ह्वीपलाई साँसद थापाले अस्वीकार गरेपछि परिस्थिति फरक बनेको हो ।
पार्टिको निर्णय र निर्देशन समेत नमानेको भन्दै जनमोर्चाले साँसद थापालाई पार्टिको सबै जिम्मेवारीबाट हटाउँदै एक वर्षका लागि पार्टिको साधारण सदस्यताबाट समेत निलम्बन गरेको छ ।
पार्टिले जस्तो सुकै कार्वाही गरेपनि थापा भने आफ्नो अडान नबदल्ने बताउनुभएको छ । थापाले, ‘हिजो काँग्रेससँगको मुठभेडमा आफ्ना पार्टिका थुप्रै कार्यकर्ताले दुःख पाएको, झुट्टा मुद्धा खेपेको, अंगभंग समेत भएको दर्द आफूले नविर्सने बताउँदै, बामपन्थी सरकार बनाउने भन्दै पार्टिकै निर्देशन र निर्णयमा संयुक्त गठबन्धनबाट निर्वाचित हुने अनी आज सत्ताका लागि काँग्रेसलाई फेरि सत्तामा लैजान आफूहरुलाई मतदान गर्न बाध्यकारी बनाउने अवस्था आफूले स्वस्कार नगर्ने अडानमा रहेको छु ।’ यसबाट कदापी पछि नहट्ने उहाँको जिकिर छ ।
गण्डकी प्रदेशको बजेट तथा नीति कार्यक्रमको छलफलमा सहभागी भएका साँसद थापाले , ‘यतिवेला संघीय संसद विघटनको अवस्था छ । संसद विघटन भएपछि संघीय साँसदहरु यतिवेला अदालत जानुभएको छ । यो ठिकै हो, आफ्नो हक अधिकारका लागि अदालत जानु स्वीकार्य छ । तर गण्डकीमा फेरि आफू सत्तामा पुग्नका लागि, अर्को पक्षलाई हराउनका लागि फेरि निर्दलीयता अपनाउँदै हुनुहुन्छ । कृष्ण थापालाई हटाएर हामी सरकारमा पुग्छौं भनेर अगाडि मिडियावजी गरिरहनुभएको छ ।’ यो निर्दलीयता भएको बताउनुभयो ।
आफ्ना लागि अदालत जानुपर्ने, तर अर्को जननिर्वाचित साँसदलाई हटाउने प्रपञ्चमा लाग्नु, यो निर्दलीयता हो । साँसद थापाले, जनताबाट निर्वाचित साँसदलाई हटाएर सरकारमा जान्छौं भन्नु, यो अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्ने चरित्र भएको जिकिर गर्नुभयो । सत्ताका लागि तपाइहरु कृष्ण थापालाई हटाउने बाटो रोजेर निर्दलीयता अपनाउनुभएको छ । ‘आफूलाई भने अदालत जानुपर्ने अर्कालाई भने अपदस्त गर्नुपर्ने ? यस्तो हुन्छ ? यसलाई इतिहासले मुल्याँकन गर्नेछ ।’ थापाले भन्नुभयो ।
गण्डकी संसदमा थापाले, ‘संविधानका धेरै अन्तरवस्तुमा मतभेद र असहमति राख्यौं । त्यसमा पनि संघीयता खर्चिलो छ, देशले धान्न सक्दैन भन्ने विषयमा हामीले अझैपनि आफ्नो मत राखिरहेको बताउनुभयो ।’ थापाले स्मरण गराउँदै हाम्रा आफ्ना विषय र मतमा अडिग रहेको बताउनुभयो ।
थापाले, संसदमा सत्ताको नयाँ रवाफमा रहेका नेपाली काँग्रेस, माखोवादी केन्द्र र समाजवादी पार्टि सहित स्यं आफ्ना पार्टिका साँसदहरु बसेको ठाउँ तिर ईंगित गर्दै ‘उहाँहरु मलाई हेरिरनुभएको छ । म उहाँहरुतिर गएर बसिदिएको भए, अलि ठूलो योजना, कार्यक्रमहरु बढेर वजेटको आकार बढ्थ्यो भन्ने सोच्नुभएको होला । तर त्यस्तो छैन ।’ भन्नुभयो ।
आफ्नो भनाई राख्ने क्रममा थापाले, योजना छनौट गर्दा, क्षेत्र, जाति र भूगोललाई खइाल गरेर प्राथमिकमा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । आफु संसदमा आउँदा एक मिटरपनि सडक पीच नभएको अवस्थामा तीन वर्षको समयमा १० किलोमिटर सडक पीच भएको बताउँदै, यसरीनै प्राथमिकता पूरा गर्ने र लक्ष्य भेट्याउने कोसिस गर्नु नीति कार्यक्रम र प्राथमिकतामा गण्डकीको उपलब्धी हो भन्नुभयो ।
वर्तमान जटिलताका रुपमा रहेको कोरोना महामारीको संकटबाट मुक्त गर्न नीजी अस्पतालमा नागरिकलाई सुताउने र उनीहरुबाट चरम आर्थिक शोषण गर्ने जुन प्रवृत्ति छ । यसलाई हटाएर नीजीकरण होईन, सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई करण गर्दै भएका सरकारी अस्पतालबाट सहज स्वास्थ्य उपचार व्यवस्थामा सरकाले जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
साँसद थापाले, गण्डकी प्रदेशको समृद्धिका लागि साँसदहरुले आफ्नो ठाउँविषेशको योजना ल्याउन जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
गण्डकी प्रदेशमा साँसद खिमविक्रमको प्रश्न : 'ढोरपाटनका वाढिपिडितको घर बनाउने बजेट खै ?'